विहारी मदिराप्रेमीहरूका कारण वीरगञ्जका ठूला होटलमा खुलेका क्यासिनो र साना होटल लाभान्वित - Yatra Daily
Home Uncategorized विहारी मदिराप्रेमीहरूका कारण वीरगञ्जका ठूला होटलमा खुलेका क्यासिनो र साना होटल लाभान्वित
विहारी मदिराप्रेमीहरूका कारण वीरगञ्जका ठूला होटलमा खुलेका क्यासिनो र साना होटल लाभान्वित
वीरगन्ज ३० बैशाख । विहारमा मदिरामा प्रतिबन्ध लगाइएकाले मदिराप्रेमीहरूका कारण यहाँका होटलहरू भिसुवा, सुरज र दियालो लर्डस् प्लाजामा रहेको क्यासिनो लाभान्वित भएका छन । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तका अनुसार क्यासिनोका ग्राहकहरू सुत्न भने आसपासका साना होटलमा पुग्ने गरेका छन् तर जुवा खेल्न क्यासिनोमा आउने गर्छन ।
यहाँका होटलहरू भिसुवा, सुरज र दियालो लर्डस् प्लाजाले क्यासिनो चलाएका छन् । भारतको विहारमा मदिरामा प्रतिबन्ध लगाइएकाले मदिराप्रेमीहरू नेपालतिर आउने गरेका छन् । तिनले पनि यहाँका होटललाई फाइदा दिएका छन् ।
वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकलाई लोभ्याउने र घुम्न लायक ठाउँको अभाव छ । भएका एकाध स्थान पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा आकर्षणभन्दा विकर्षणका केन्द्र जस्ता बनेकाले यहाँ पर्यटकीय गतिविधि शून्य जस्तै छ । ‘सम्भावना नभएर होइन, प्रचारप्रसार हुन नसक्दा पर्यटक तान्न नसकिएको हो,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रचेन्द्रसिंह थापा भन्छन्, ‘तर यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि हालसम्म केही काम भएको छैन ।’
होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष पन्तका अनुसार यहाँका होटल बारा–पर्सा करिडोरमा खुलेका औद्योगिक प्रतिष्ठानका पाहुनाका कारण धानिएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र मर्मतका लागि आउने उच्च तहका प्राविधिक, अडिटर लगायत व्यक्ति नै अहिलेका मुख्य पाहुना हुन् । अब हामी पर्यटक लक्षित व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
वीरगञ्जमा हालै रू. एक अर्बको लगानीमा पहिलो चारतारे होटल दियालो लर्डस् प्लाजा खुलेको छ । होटलका सञ्चालक अनिलकुमार रुंगटा राजनीतिक स्थायित्वसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासले गति लिने अपेक्षामा लगानी गरेको बताउँछन् । यो होटल खुलेपछि यहाँ अति विशिष्ट पाहुनाको आतिथ्यमा आइपर्ने समस्याले निकास पाएको छ । यसअघि विशिष्ट अतिथि सहभागी हुने वीरगञ्जका कार्यक्रमहरू २६ किलोमिटर टाढा बाराको सिमरास्थित होटल इच्छामा हुने गर्थे ।
व्यवसायीहरूका अनुसार वीरगञ्ज क्षेत्रमा खुलेका होटलमा रू. २० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका पाहुनालाई मात्र लक्षित गर्ने हो भने यहाँको होटल व्यवसायले अब थप नयाँ लगानी थेग्न सक्दैन । एक वर्षयता मात्रै वीरगञ्जमा ठूलो लगानीका आधा दर्जन होटल खुलिसकेका छन् ।
Previous articleपर्साको अलौंमा १५० बोरा केराउ प्रहरीद्धारा छापामारी गरी बरादम
Next articleआईपिल क्रिकेट म्याचमा सट्टाबाजी गरेको आरोपमा हरेराम, दरोगा र राकेश पक्राउ